/blog/gallery/Ihe ọ bụla gbasara Oxandrolone (Anavar), ịkwesịrị ịma
Ihe na 10 / 26 / 2019 by 阿斯劳 dere na gallery.
Gịnị bụ Oxandrolone (gịnị bụ Oxandrolone)Anavar)?
Oxandrolone (53-39-4), ya na Anavar ntụ ntụ dị ka aha akara ya, bụ ọgwụ sịntetik androgen na anabolic steroid (AAS) nke bụ ihe ama ama maka ike ya na ume ya. Ọ bụ n'etiti steroid anabolic a na-ahụkarị na nke a na-ejikarị. Anabolic pụtara na ọ na-ebuli protein ndị dị na sel, yabụ na-ebute mmụba ngwa ngwa na ọkpụkpụ siri ike.
N'ịbụ analogue nke testosterone (ihe mejupụtara ya yiri nke testosterone), Anavar na-arụ ọrụ ụfọdụ ndị na-anabata nuklia ma jikọta ha dị ka ụzọ testosterone si eme. N'ihi nke a, ọ nwere ike ịba uru na ọgwụgwọ ngbanwe nke testosterone.
Oxandrolone (Anavar) ntụ ntụ (53-39-4) dị mma maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị mgbe a na-agbaso usoro ọgwụgwọ ziri ezi. Nke ka mma, mmetụta ya nwere ike ịdị na-adịkarị nwayọọ. Dị ka nke a, ọ bụ otu n'ime ụzọ isi nweta ihe ngwọta maka ndị na-arịa ọrịa nje HIV ma ọ bụ hypogonadism nke nwoke ka ọ na-eme ka njigide nitrogen dị ka oke akwara na-enweghị abụba.
Ọ bụrụ na ị na-achọ steroid anabolic dị nro ma na-ebu ọnụ maka nwoke ma ọ bụ nwanyị, o yighị ka ị ga-agahie ntụ ntụ na Oxandrolone (53-39-4). Peoplefọdụ ndị mmadụ, ọbụlagodi na nyocha Anavar reddit, na-akpọ ya "The Girl Steroid" n'ihi na ọ bụ n'etiti steroid ole na ole na-aga nke ọma na ọtụtụ ụmụ nwanyị.
AASraw bụ ọkachamara na-emepụta anavar ntụ ntụ (oxandrolone).
Akụkọ ihe mere eme nke Oxandrolone
Oxandrolone (Anavar) akọwapụtara na nke mbụ n'afọ 1964 na Searle Laboratories (nke bụzi enyemaka nke Pfizer). Companylọ ọrụ ahụ bụkwa ndị na-emepụta ọgwụ ndị ọzọ a ma ama dị ka Celebrex, NutraSweet na Ambien. Ọ bụ nchọpụta nke mbọ aka nke Raphael Pappo na Christopher J. Jung.
Mmetụta androgenic dị oke nro nke Oxandrolone nwere mmasị na ndị ọkachamara nyocha ahụ metụtara mmetụta anabolic ọgwụ. Ha mechara, n’afọ 1964, webatara ọgwụ a ka ọgwụ ọgwụ maka mmelite akụrụngwa ike n’arụ ndị n’ebughi oke ibu yana ọgwụgwọ HIV / AIDS.
Ọ bụ ihe nwute, ndị bodybuilders jiri ọgwụ ahụ mee ihe n'ụzọ dị ukwuu, nke a kpatara mgbasa ọha na-adịghị mma. N'ihi nke a, Searle Laboratories kwụsịrị ya na 1989.
Mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, Bio-Technology General Corporation (Bio-Technology General Corporation) weghaara nyocha na mmepe nke ọgwụ. Ọnwụnwa ụlọ ọgwụ ụlọ ọrụ mere na ọgwụ ahụ na 1995 na-eduga na ntọhapụ ya nke abụọ, mana mgbe ahụ n'okpuru Oxandrin (aha njirimara).
N'oge ahụ, a na-ere ọgwụ anabolic steroid n'okpuru aha aha dị iche iche, gụnyere Jenesis Oxandrolone na Oxandrin, n’ụwa niile. Ka oge na-aga, emesiri mechie ya ka ọ bụrụ aha aha America ugbu a, Anavar.
Ka oge na-aga, Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) kwadoro Oxandrolone maka ọnọdụ ọgwụ ọjọọ nke ụmụ mgbei dị ka ọgwụgwọ maka Turner Syndrome, nje HIV na-ebute oke ọnwụ yana yana ọnwụ n'ihi nje HIV.
Ojiji Oxandrolone ma n’ahịa ma na nzuzo
Oxandrolone dị oke ọnụ maka imepụta ma enwere ụkpụrụ siri ike gbasara nrụpụta, ire na oriri. Iji bido ihe mgbochi ndị a wee chekwaa ọnụ ahịa, enwere ọtụtụ ndị mgbere ahịa werere azụmaahịa na ire ọgwụ ọjọọ n'ime ala.
N'ụzọ dị mwute, a na-emepụta ahịa ojii 'Oxandrolone' n'ụlọ ụlọ ebe a na-edebe ihe ọcha na-enweghị ụkpụrụ ebe a na-agbakarịghị agbaso ụkpụrụ chọrọ. N'ihi ya, ọ na-esiri ndị ọrụ ike ịchọta ahịa Anavar ziri ezi site na ahịa ojii ma ọ bụ ụlọ nyocha ime ala. Ewezuga n’enyeghi nsonaazụ ha chọrọ, ụdị ọgwụ ahụ nwere ike ibute nsonaazụ na-adịghị mma.
Nsogbu ọzọ Anavar na-ere n’ahịa dị n'okpuru ala bụ na enwere ike imerụ ya n’etiti ụmụntakịrị n’ihi na enweghị ụkpụrụ na-egbochi nnweta na ojiji ha.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta Anavar nke zuru oke ma dịkwa nchebe, gbaa mbọ hụ na ị mere nke gị Oxandrolone ntụ ntụ zụrụ sitere na onye na-ere ahia nke nwere ikike. Ọ bụ ezie na ihe Oxandrolone zụtara n'aka ndị na-ere ụdị ihe ahụ nwere ike ịdị ọnụ karịa ma e jiri ya tụnyere ndị ahịa ojii, ha bara uru.
Ekwenyesiri ike na ị na-enweta ezigbo ntụ ntụ ma ọ bụ ngwaahịa ikpeazụ n'ihi na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa dị otú ahụ agaghị etinye ihe ikikere ha n'iyi n'ihi ire ngwaahịa na-enweghị ikike. AASraw so n’etiti ndị na-ere ahịa ezigbo Oxandrolone.
Ọnụahịa oxandrolone na-ejikarị elu. Yabụ, ọ bụrụ na ị hụ onye na-ere ọgwụ a na 'ọnụ ala miri emi', chọọ ịchọpụta ma onye ahịa a nwere ikikere ma rụọ ọrụ n'ụzọ iwu iji hụ na ị gaghị enweta ngwaahịa ahia.
Anavar / Oxandrolone bụ ihe dị oké ọnụ iji rụpụta, ọ na-adabakarị ọdụ ịzụta ya n'aka onye ahịa ọ bụla nke na-enye ya na 'ọnụ ala miri emi'. Can nwere ike chọpụta Anavar nyocha iji chọpụta ma ọ bụrụ na onye na-ere ahia ahụ na - arụ ọrụ n'ime usoro iwu yana ọ bụrụ na ngwaahịa ha zuru oke. Nyocha Anavar nwekwara ike inye gị echiche gbasara ebe kachasị mma iji zụta ọgwụ.
Ọnọdụ Oxandrolone na US na mba ndị ọzọ
Na United States, stkpụrụ Na-achịkwa Na-ekewa Oxandrolone / Anavar, n'etiti ọtụtụ androgen na anabolic steroid dị ka ihe ndokwa nke III na-achịkwa ihe. Nke ahụ pụtara na mmadụ ga-enweta ya site na dọkịta na ụlọ ahịa ọgwụ ikikere.
Ntaramahụhụ iwu nyere mmadụ maka ịnwe ọgwụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị n'oge usoro III, gụnyere Anabolic steroids ntụ ntụ nke Oxandrolone ma ọ bụ Anavar ikpeazụ, dabere na iwu ndị akọwapụtara akọwapụtara na-achị steeti.
N'ọtụtụ oge, a na-etinye ndị dara iwu n'ụlọ mkpọrọ ma tụọ ha ntaramahụhụ. Dabere na Iwu Nchịkwa Achịkwa achịkwa, ụfọdụ n'ime mpụ metụtara Oxandrolone gụnyere ị nweta ọgwụ aghụghọ na ịnweta ọgwụ yana ịnweta ọgwụ n'enweghị ezigbo ọgwụ.
Na UK, Oxandrolone bụ otu n'ime ihe ndị a na-achịkwa na-ahazi na Schedule IV; ndị na-agwọ ọrịa anabolic niile so na ụdị a.
Na Canada, iwu obodo banyere Oxandrolone yiri nke ahụ na UK ruo 1996 mgbe emezigharịrị iwu ahụ, ewezuga usoro oge IV. N'ihi ya, enweghị ntụzịaka doro anya gbasara ihe gbasara iwu maka ndị nwere ọgwụ ahụ, ndị nwere ya ugbu a yana ndị nwere mmasị ịnweta ya.
Agbanyeghị, iwu steroid nke Canada nwere ọkwa nke na-ekwupụta na mmadụ n'ime mba ahụ enweghị ike ịzụta ọgwụ ahụ belụsọ ma ha kọwaa ihe kpatara ha ji chọọ ịzụta ya. Dabere na ihe kpatara ya, onye na-ere ere nwere ike ịnabata ma ọ bụ jụ arịrịọ ịzụta ya. Mgbalị ịzụta steroid kwesịrị ịgbaso ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 30 tupu e mee onye ọzọ.
Vagueness na Iwu ọgwụ Canada, karịsịrị Oxandrolone, yiri ka ọ na-agbanwe ụma iji mee ka ndị isi ya nwee ikike ikpebi ikpe ebe a na-ahụ ndị na-emeju ahụ iji steroid maka ebumnuche ntụrụndụ. Agbanyeghị, n'ọtụtụ oge, mmejọ mbụ Anavar metụtara na-adọta ego adịghị mma karịa $ 2000 na oge ịtụ mkpọrọ ruo ọnwa 18.
Ọnọdụ akụrụngwa Oxandrolone dị na China
Nchịkwa nke steroid dị ka Oxandrolone bụ nke a na-achịkwa nke ọma n'ọtụtụ mba, nke a na-amachikwa ọnụ ọgụgụ ndị na-emepụta ya.
Agbanyeghị, ndị na-ahụ maka ahịa ojii na mba dị iche iche, gụnyere US na-eji ohere iwu akwadoro ịbubata akụrụngwa nke Oxandrolone ma mepụta ma ree ọgwụ ahụ na-enweghị ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ gọọmentị dị mkpa.
China nwere iri puku kwuru iri ndị nyere ikike ire uda nke Oxandrolone. Nke a na - eme ka ngwaahịa a dị na mba karịa maka ndị na - azụ ahịa ga - achọ ịzụta ya maka nhazi ndị ọzọ. Ọ bụ ihe nwute na ụfọdụ udu ikuku Oxandrolone na-ebubata na China bụ ndị akwụna, na-eduga n'ịzụpụta na ire ahịa ire ere Oxandrolone n'ofe ụwa.
Kedu ihe ị ga - atụ anya iji Oxandrolone?
Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ Oxandrolone na-ewere steroid iji nweta ibu site na uto muscle. Nke a bụ iji meziwanye ịdị mma nke ndị mmadụ na-enwe oke ibu n'ihi ọrịa ma ọ bụ ịwa ahụ.
N'ụzọ dị ịtụnanya, uru dị ukwuu a na-enweta site na iji Anavar bụ abụba akwara maka na homonụ nke ọgwụ a na-eweta adịghị mma. N'ihi ya, ahụ gị agaghị ahụ maka njigide mmiri dị ukwuu n'ihi iji steroid. Ihe ozo di egwu banyere uto ogwu a bu na odi mfe ka onye ọrụ ijigide ibu na-akpata.
Ọ bụ ezie na ọgwụ nwere ike ọ gaghị enye uru dị oke karịa nke ndị na-esite na ojiji nke ndị nnọchianya ndị ọzọ a ma ama dị ka Testosterone na Anadrol, ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị maka ndị mmadụ na-achọ uru ọfụma. Ọ bụ ya mere ụmụ nwanyị ji ahọrọ ya n'ihi na ọtụtụ n'ime ha nwere mmasị naanị ntakịrị mmụba.
Ma ịchọrọ Anavar maka ụmụ nwoke ma ọ bụ Anavar maka ụmụ nwanyị maka inweta oge maka oge ezumike, ị ga-ahụrịrị usoro metabolic dị mma nke Oxandrolone n'anya. 'Ll ga-achọpụta na ọ na - eme ka ị nweta obere abụba dị ntakịrị n'oge a ka atụnyere mgbe ị na - eji steroid ndị ọzọ siri ike.
Anavar maka ụmụ nwoke ma ọ bụ Anavar maka ụmụ nwanyị nwere ike ịbụrụ gị nnukwu enyemaka maka oge ịkpụ. Ọgwụ na-adị ike anabolic. N'ihi ya, ọ dị oke mma na ịchekwa akwara anụ ahụ mgbe mmadụ na-eri nri.
Mgbe ịchọrọ ịkwanye abụba nke anụ ahụ, nri calorie gị kwesịrị ịdị ala karịa kalori ole ị na-ere ka ọ dị maka mmezi anụ ahụ. Agbanyeghị, na-agbanyeghị izu okè na nri gị, ị ga-atụfu ụfọdụ akwara ma ọ bụrụ na ahụ gị adịghị ike ma ọ bụ ọgwụ anabolic siri ike. N'iburu n'uche akụrụngwa anabolic ya siri ike, nke ahụ bụ ebe Anavar na-eji aka.
Mgbe ị na-eji Anavar n’oge ịkpụkọ, anụ ahụ gị ga -eme karịa abụba nke ọma. E mesịa, ị ga-ahụ ahụ ike nke ọma, ị ga-adị ka ọ gbasiri ike ma nwekwuo ike ịkọwa. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ụmụ nwoke ji ahọrọ Anavar maka oke ibu.
Anavar bụ steroid steroid ka masịrị maka ndị na-eme egwuregwu n'ihi ike ya na-akwalite ike. Agbanyeghị, nsonaazụ ya na nke a ekwughi dịka nke steroid ndị ọzọ dị ka Halotestin ma ọ bụ Dianabol.
Ike nke onye na-eme egwuregwu na-emetụta ọsọ ya na ike ya, ha abụọ nwere mmetụta dị omimi na mmega egwuregwu ọ bụla. Dị ike na-eme egwuregwu bụ, ka mma ha arụmọrụ.
E wezụga ike, ndị na-eme egwuregwu kwesịrị ịdị obere ọkụ ma, yabụ, achọghị nnukwu mmegharị akwara. N'ihi na ọ na-ewusi mmadụ ike n’enweghị ike ịbawanye uru akwara ha, Anavar na-eme ka egwuregwu na-eme ka ọ dị mma. Nke kachasị mma, ọ dịghị eduga na njigide mmiri, nke nwere ike bụrụ ihe ọzọ na-egbochi onye na-eme egwuregwu.
Ma ị na-eji Anavar iji kpochapụ obere abụba ma ọ bụ na-eme ka egwuregwu gị ka mma, ị ga-achọpụta na ozugbo ị theụrụ ọgwụ ahụ dịka enyere gị n'iwu, ọnụego mgbake gị ga-akawanye nke ọma. Ọzọkwa, ọ na-eme ka ntachi obi gị sie ike.
N'ihi nke a, ị ga-ewe ogologo oge tupu ike gwụ gị mgbe ị na-eme mmega ahụ, yabụ ike ị na-agbatị ike na ogologo oge. Nke a ga - enyere gị aka ịba uru karịa n'ọzụzụ ọzụzụ anụ ahụ gị.
Lee ndị nsonaazụ ndị a na-ahụkarị maka ọtụtụ n'ime steroid a ma ama. Ka anyị lee ma mmetụta sideandrolone nwere ihe ọ bụla metụtara ha.
N'adịghị ka ụfọdụ ndị steroid dị ka Trenbolone na aromatize, si otu a na-akpata gynecomastia, homonụ nke Oxandrolone na-eweta anaghị akpata ụdị mmetụta akụkụ estrogenic. Nke a bụ n'ihi na ọ naghị ebute njigide mmiri nke ga - eme ka ọkwa estrogen ahụ ghara ịrị elu. Ngwongwo mmiri anaghị egbochi mmiri na-eme ka onye ọrụ ghara ịdị na-arịa ọbara mgbali elu.
A na - ekwenyekwa na Oxandrolone na - enweghị nsogbu ọ na - akpata nsonaazụ estrogenic na eziokwu ahụ bụ na ọ naghị ebu ọrụ ọ bụla metụtara progestin.
Ọ bụ ezie na Oxandrolone adịghị androgenic, ọ na-eweta obere ọrụ androgenic. N'ihi nke a, ndị na - eji ya eme ihe nwere ike ịmalite ọria na ndị nwere oke isi nkwọcha nwoke ga - enwetarịrị ntutu isi ọzọ mgbe ejiri steroid.
Anavar maka ụmụ nwanyị nwere ike ịmịpụta androgenic mmetụta nke nwere ike ịkwalite mgbaàmà na-amaghị nwoke dịka ntutu isi nke anụ ahụ, ụda olu miri emi na ịmụba amụba na ụmụ nwanyị. Agbanyeghị, enwere ike igbochi ihe mgbaàmà ahụ site na iwere ikike Anavar dosage.
Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, ị na-ahụkwa ihe na-egosi na ịchọpụta nwoke na nwanyị, a dụrụ gị ọdụ ka ị kwụsị ị immediatelyụ ọgwụ ozugbo. Emechara nke ahụ, ihe mgbaàmà ahụ ga-apụ n'anya. Ma ọ bụghị ya, ihe mgbaàmà ahụ nwere ike ịghọ akụkụ nke gị ma ọ bụrụ na eleghara ha anya ma soro steroid ahụ gaa n'ihu.
Ka o sina dị, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-eji steroid ahụ adịghị ahụkebe androgenic mmetụta n'ihi na ọdịdị androgenic dị ala dị ala.
N'adịghị ka ndị steroid anabolic ndị ọzọ ọ dị mkpa ka ejiri ya na ndị na-egbochi 5-alpha reductase maka nke ikpeazụ iji gbochie nsonaazụ androgenic nwere ike, Anavar nwere nchebe ma dịkwa nro ọbụlagodi ndị na-egbochi ya. Nke a bụ n'ihi na achoro 5-alpha reductase enzyme iji belata testosterone na dihydrotestosterone, mana ebe ọ bụ na Oxandrolone adịworị dihydrotestosterone, ọchọghị enzyme ahụ.
Otu n'ime mmetụta sideandrolone dị njọ bụ ihe metụtara cholesterol. Ihe homonụzụ nke Oxandrolone na-egbochi HDL cholesterol site na 50% ebe ọ na-ebuli ọkwa LDL cholesterol ihe ruru 30%.
N'ihi mgbanwe cholesterol ndị a, a na-adụ ndị nwere nsogbu cholesterol ka ha zere ịgbakwunye iji oxandrolone. Ma ọ bụghị ya, a na-agba ndị nwere ahụike zuru oke maka ojiji ya ike ịnọgide na-ebi ndụ dị mma site na iri nri cholesterol nke nwere oke abụba na ịme ọtụtụ ọrụ obi.
Mgbe ị na-a drugụ ọgwụ a, ọ ga-adị mma ka ịbelata abụba juju afọ yana obere shuga. You nwere ike itinye ihe cholesterol ọgwụ antioxidant iji dobe ọkwa ha.
Steroid ọ bụla ị na-ewere, gụnyere Anavar, na - ebelata mmepụta eke testosterone n'ahụ gị. Ka o sina dị, ọnụego iwepụ iche na steroid gaa na nke ọzọ. Ọ bụrụ na atụnyere steroid ndị ọzọ na ere ugbu a, Anavar nwere otu n'ime mmetụta na-adịkarị ala. Ọ na - egbochi ogo ogo ọbara n'ogologo ọkara.
Ka o sina dị, n’agbanyeghi na Anvar sitere na nrụpụta testosterone sitere na obere ihe, a na-adụ ndị nwoke ọdụ ka ha tinye extogenous testosterone akụkụ nke mmeju ha. Ma ọ bụghị ya, hormone oxandrolone nwere ike ibute ọnọdụ metụtara testosterone dị ala, n'etiti ihe mgbaàmà ndị ọzọ nwere nsogbu.
Agbanyeghị, ụfọdụ ụmụ nwoke enweghị nsogbu ọ bụla metụtara testosterone dị ka nsonaazụ site na iji Anavar ọbụlagodi mgbe a na-ebelata steepụ testosterone nke 50% site na steroid. Nke a dabere na nwoke testosterone eke mmadụ. Ka o sina dị, ọtụtụ ụmụ nwoke ga-achọ ọgwụgwọ testosterone dị ukwuu iji belata mgbaàmà ọ bụla enwere ike n'ihi ọgwụ steroid.
Ọ dabara nke ọma, dị ka ọgwụ steeti anabolic ọ bụla, mmetụta ọjọọ testosterone nke Anavar ga-amalite ịkwụsị ịkwụsị ozugbo mmadụ kwụsịrị ị itụ ya. Ma enwere mgbake zuru oke ga-ewe oge ị ga - eme ma ọ bụrụ nke ahụ ka usoro ọgbago steepụ (PCT) na - atụ aro ka usoro steroid kwụsịchaa. PCT na-eme ka usoro mgbake ahụ dịkwuo elu.
Anavar bụ C17-aa Anabolic steroid ya mere, ọ nwere ike ibute mmebi imeju, ọbụlagodi na enweghị ya. Continuedga n'ihu na steroid ga-ebute oke mmụba nke ụkpụrụ enzyme imeju. Enzyme na-abawanye nke imeju na-emesi umeji ike, na-abawanye ihe ọghọm ya na-emebi.
Yabụ, maka ọdịmma nke imeju gị, ọ dị mkpa izere iji steroid anabolic C17-aa, gụnyere Anavar ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu imeju ọ bụla. Ọzọkwa, a don'tụbiga mmanya oke mgbe ị na-eme ka a na-atụgharị ọgwụ ọgwụ C17-aa Anabolic steroid dị ka Anavar iji zere iriju imeju gị.
Onye na-egbochi imeju na atụmatụ mmeju gị mgbe ị na-eji Oxandrolone ga-aga ogologo ụzọ iji nọgide na-enwe ahụ ike imeju gị. Ma ebe ọ bụ na iji steroid eme ihe ogologo oge nwere ike ibute mmebi imeju, ọ dị mkpa ka ị kpalata oge mgbakwunye Anavar karịa izu 8.
Ọ bụ ezie na Oxandrolone dị mma maka ụmụ nwoke, usoro Anavar dị nro n ’ụmụ nwoke nke na ihe ka ọtụtụ n’ọrụ ndị nwoke na-ahụ na ọ nweghị ihe ọ bụla maka mkpa ha na-eto, ọkachasị n’oge ezumike ma ọ bụ n’oge uto. Agbanyeghị, ha ka rapagidesiri ike na ya maka ichekwa uru ahụ, nke bụ otu ebumnuche maka ọtụtụ ndị ọrụ. Nke kadị mma bụ na ọgwụ ahụ na-eme ka mmadụ na-arụ ọrụ metabolism.
Okirikiri Anavar maka ụmụ nwanyị
Ọ bụ ezie na homonụ nke Oxandrolone abụghị maka mmụba nke oke, ọ bụghị ihe ọhụrụ maka nwanyị ọrụ iji nweta ahụmịkị anụ ahụ 100% nweta ya. Dị ka ndị dị otú a, yana n'eziokwu na ọ bụ steroid a na-anabata nke ọma na ọ bụ ihe aga-ahọpụtara maka ụmụ nwanyị na-eme egwuregwu nwere oke ọrụ dị elu.
Oxmụ nwanyị ndị ọrụ Oxandrolone na-eri nri ma na-eto eto na-eritekwa uru dị ukwuu na ọgwụ ahụ n'ihi na ọ na-akwado ọtụtụ akụkụ ahụike ahụ gụnyere ịkpụ ahụ, ọdịdị na ụdị bikini.
Usoro ọkọlọtọ Anavar maka ụmụ nwanyị na-abụkarị nọ na10mg ruo 20mg nke ọgwụ kwa ụbọchị ma na-abụkarị na izu isii. Ọ bụ ezie na ụfọdụ usoro ihe gafere gafere 20mg, ngafe adịghị mkpa ma nwee ike ibute nsonaazụ oxandrolone.
Bụrụ na ị bụ nwanyị ma chọọ iji steroid mee ihe karịrị izu isii, ọ ga-adị mma ka ịmalite ma mechaa ya na 3 izu 4 izu tupu ịmalite usoro mmụta izu 6.
Okirikiri Anavar maka ụmụ nwoke
Otutu ndi nwoke ji eme ihe Anavar maka oke ibu karia mgbe ha na - eme usoro ịkpụ / nri. Ha na-ahụ 50mg nke ọgwụ kwa ụbọchị dị ka usoro ọgwụ Anavar kwesịrị ekwesị. Agbanyeghị, dịka nwoke, ị nwere ike iji ihe ruru 80mg kwa ụbọchị dịka n'ime ogo ahụ, ọgwụ ahụ adịghị mma maka ahụ gị.
Ịtụle Ọnụahịa Oxandrolone dịkarịa ala $ 2 kwa maka taabụ 10mg, okirikiri Anavar maka ụmụ nwoke nwere ike dị oke ọnụ.
Usoro ogwu Oxandrolone
Ọgwụ Anavar dị mma dịgasị iche na-etolite otu onye nye onye ọzọ; ọ dabere na nwoke na nwanyị yana ebumnuche ya onwe ya.
N'ozuzu, nwanyị ga-achọ usoro ọgwụ Oxandrolone dị ala karịa nwoke iji nweta otu nsonaazụ / uru. Dị ka ọ na-adịkarị, ịkpụ okirikiri Anavar maka nwanyị dị na 10mg n'ụdị kwa ụbọchị. Agbanyeghị, usoro ubọchị ahụ nwere ike ịkarị oke dịka 20mg na agbanyeghị na ọ nwere ike ịkpalite nsonaazụ achọrọ, ụdị ọgwụ steroid dị elu nwere ike ime ka nwanyị mepụta akara
Nwa nwoke na-eme egwuregwu nke nwere mmasị ịdabere na usoro ọgwụ Anavar nke 80mg kwa ụbọchị ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị. Na agbanyeghị, enwere ike ịnwe obere obere mana ọ gaghị erughị 30mg, ma ọ bụghị na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma.
Dabere na nyocha na iche iche Anavar Reddit nyochaa, ọkọlọtọ usoro onunu ogwu nke Anavar maka ụmụ nwoke bụ 50mg kwa ụbọchị.
Etu esi aru oru Oxandrolone
Ntụ ntụ: kwa gram 1 nke Oxandrolone
Nsonaazụ kachasị elu mepụtara: 20 mg / ml
1 gram nke Oxandrolone ntụ ntụ
Ihe ngbenye nke 1 nke kwesiri ekwesi n’enye gi otu olu
8 ml nke PEG 300
2 ml nke 190 Proof Grain Alcohol
Ebe ị ga-azụta Oxandrolone
Naanị ebe ị nwere ike ịzụta ezigbo ihe na Anavar dị elu sitere na onye na-ere akwụkwọ ikikere na nke iwu kwadoro. Na ederede ahụ, AASraw bụ ebe kachasị mma isi nweta ngwaahịa a.
AASraw na-emekọ njikọ na mmepụta nke Oxandrolone ma yabụ anyị nwere ike ịnye gị ọnụọgụ ọ bụla Anavar maka ire ere ma ọ bụ kwụsị oriri dị ka ogologo dị ka ị na-emezu ihe ndị dị mkpa chọrọ. Anyị na-arụ ọrụ n'okpuru CGMP na sistemu njikwa njikwa anyị nwere ike inyere anyị aka ịrụ ọrụ n'ime oke iwu na ụkpụrụ dị mkpa iji hụ na anyị na-enye ngwaahịa ndị kachasị elu.
Nkọwapụta Meta: Oxandrolone (Anavar) bụ ọgwụ androgen na anabolic steroid (AAS) nke bụ ihe ama ama maka ike ya na ume ya. Ọ bụ n'etiti steroid anabolic a na-ahụkarị na nke a na-ejikarị. Oxandrolone enweghị ihe dị mma maka ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị ga - eji ya mgbe ọ bụla a na - agbaso usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
Demling RH, DeSanti L: Oxandrolone emeela ka uru akụ na ụba dabere n'oge mgbake ahụ na-agba ọkụ na-adịgide mgbe ọ kwụsịrị steroid anabolic. Ọkụ na-enwu. 2003 Dec; 29 (8): 793-7. [PMID: 14636753]
John Cabaj, "Usoro maka njikọ nke oxandrolone." US Patent US20030032817, nyere February 13, 2003
Karim, A., Ranney, RE, Zagarella, J., & Maibach, HI (1973). Omume Oxandrolone na metabolism n'ime mmadu. Usoro ogwu na ogwu, 14 (5), 862-869.
Raiti, S., Trias, E., Levitsky, L., & Grossman, MS (1973). Oxandrolone na uto mmadụ na-eto eto: tụnyere uto-na-akpali akpali na obere ụmụaka. Akwụkwọ bụ American Journal of Disease of Children, 126 (5), 597-600.
Rosenbloom, AL, na Frias, JL (1973). Oxandrolone maka nkwalite uto na ọrịa Turner. Akwụkwọ bụ American Journal of Disease of Children, 125 (3), 385-387.
Strauss, RH, Liggett, MT, na Lanese, RR (1985). Anabolic steroid na-eji ma achọpụta mmetụta dị na ụmụ nwanyị iri na-azụ ọzụzụ. Jama, 253 (19), 2871-2873.
Ezubere iche ọgwụ ọjọọ Ibrutinib: Gịnị Ka Know Maara
Ntuziaka yingzụcha Ihe zuru ezu Maka SARM SR9009 Bodybuilding Kedu ka Flibanserin si enyere nwanyị aka dị ka Mmekọahụ Mmekọahụ